C/weli Gaas: Ma jiro wax heshiis ah oo aan gaarnay Beesha Caalamka. - Wargeyska Faafiye
C/weli Gaas: Ma jiro wax heshiis ah oo aan gaarnay Beesha Caalamka.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in uusan jirin wax heshiis oo ay la gaareen xubnaha beesha caalamka ee cadaadiska ku saarayay Puntland in ay ogolaato go’aamadii ka soo baxay shirkii Madasha wadatashiga hanaanka doorashooyinka 2016-ka.
Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in wafdiga oo uu hogaaminayay Ergayga gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating in ay kulamo la yeeshaan madaxda Puntland, siyaasiyiin hore iyo ururada bulshada rayidka kuwaasoo u gudbiyay mowqifkooda ku aadan shirkii Madasha Wadatashiga ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Wuxuu sheegay in uusan jirin wax heshiis ah oo dhexmaray Beesha Caalamka iyo madaxda Puntland laakiin la isku afgartay in dib la isugu soo laabto.
Danjiraha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Keating ayaa isna sheegay in kulamadii uu la qaatay Puntland in ay ahaayeen kuwo lahaa muhiimad gaar ah iyadoo ay kulamadaas ka qeyb galeen danjirayaasha dalalka Maraykanka, Ingiriiska, Talyaaniga, Sweden, Uganda, Itoobiya, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD.
Michael Keating ayaa sheegay in uusan jirin wax heshiis ah oo la gaaray isagoo intaas raaciyay in waxyaabaha ay kala kulmeen madaxda Puntland iyo qeybaha bulshada in ay kula laaban doonaan magaalada Muqdisho.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsBay iyo Bakool: Degmooyin cusubAtariishada Filimada Hindiga ee Jiah Khan oo is-dishay!3 qof oo gaajo iyo harraad ugu dhimatay Jubbada Hoose.Somali man sentenced to life in prison of killing 4 people in North DakotaDhaktar Ajnebi Ah Oo Si Khaldan Makaanka Uga Saaray Gabadh Booqatay Cusbitaal Ku Yaal Hargeysa.